Shuruudo lagu xiray Ciidamada iyo Shaqaalaha maamulka Somaliland ee doonaya in ay galaan … | Allbanaadir.com
Home NEWS Shuruudo lagu xiray Ciidamada iyo Shaqaalaha maamulka Somaliland ee doonaya in ay...
Shuruudo lagu xiray Ciidamada iyo Shaqaalaha maamulka Somaliland ee doonaya in ay galaan …
Fadhigii 69aad ee golaha wasiirrada Somaliland oo uu shir guddoominayey Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa warbiximo lagaga dhegeystay qaar ka mida wasaaraddaha, lagagana dooday arrimaha diyaar garawga doorashooyinka.
Wuxuu goluhu dood ka yeeshay diyaar garowga doorashooyinka Somaliland ku soo fool leh, madaama ay xukuumadda ka go’an tahay qabsoomida doorashooyinku, waxaana goluhu go’aamiyey innaan la ogolayn in shaqaalaha dawladda iyo ciidamadu iyagoo ku gudda jira shaqadii qaranka inay muujiyaan astaamaha iyo dhaq-dhaqaaqa ololaha musharaxnimo ee hankooda tartanka doorashooyinka, balse cidii danaynaysa inay ka qayb-galaan doorashooyinka waa inay banneeyaan shaqooyinka ay qaranka ka hayaan.
Ugu danbayn wuxuu madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa golaha wasiirada ku adkeeyey inay dardar-geliyaan mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda sannadka cusub.
Previous articleMahdi Guuleed oo raali galin iyo xaal ka bixiyay Hadal uu ku taageeray Farmaajo !!
Next articleMadaxweyne Deni oo weerar culus ku qaaday Villa Somalia soona bandhigay Qorshe ay …